Football Khabar » बंगलादेशलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा : सुनील बने नायक !
बंगलादेशलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा : सुनील बने नायक !
नेपाल आफ्नो भूमिमा जारी १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत पुरुष फुटबलको फाइनल प्रवेश गरेको छ । आज आइतार भएको लिग चरणको निर्णायक खेलमा पाहुना टोली बंगलादेशलाई १–० ले हराउँदै नेपाल स्वर्ण पदक नजिक पुगेको हो । नेपालका लागि १ मात्रै विजयी गोल सुनील बलले गरे ।
काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा साँझ सुरु भएको खेलको पहिलो हाफमा नेपालले बनाएको १–० को अग्रता नै जितका लागि काफी बन्यो । फाइनल पुग्नका लागि आजको निर्णायक खेलमा कम्तीमा बराबरी वा जितको लक्ष्य लिएर मैदान उत्रिएको नेपालका लागि खेलको ११औं मिनेटमै सुनील बलले गोल गरेका थिए । उनले कप्तान सुजल श्रेष्ठको पासमा बक्सभित्रबाट सहजै गोल गरेका थिए ।
यता, फाइनल पुग्न नेपालविरुद्ध स्पष्ट जितको लक्ष्य लिएर उत्रेको बंगलादेशले दोस्रो हाफमा गोलका लागि ठूलै संघर्ष गरे पनि गोल गर्न नसक्दा उपाधिको बाटो घरेलु टोली नेपाललाई सुम्पियो । र, खेल नेपालले जित्यो ।
नेपालका कप्तान सुजल श्रेष्ठ दोस्रो हाफमा घाइते भएर मैदान छाडेका थिए । उनलाई स्ट्रेचरमा राखेर मैदानबाट निकालिएको थियो । उनको स्थानमा सेसेहाङ आङ्देम्बेलाई मैदान छिराइएको थियो ।
खेलको अन्तिम समयमा नेपाल र बंगलादेशका खेलाडीबीचको फउललाई लिएर बंगाली खेलाडीले रेफ्रीमाथि हातपातको प्रयास गरेपछि केहीबेर तनाव सिर्जना भएको थियो । सोहीक्रममा बंगलादेशका एक खेलाडीले रातो कार्डसमेत पाए । रेफ्रीमाथि हातपात गर्ने बंगाली खेलाडीमाथि रेफ्रीले खेलको प्रतिवेदन बुझाएका आधारमा थप कारबाही हुनेछ ।
यससँगै नेपालले लिग रचणमा ४ खेलबाट कूल १० अंक जोड्यो । दोस्रो स्थानमा रहेर फाइनल पुगेको भुटानले ९ अंक बनायो । बंगलादेश ४ अंकसहित तेस्रो स्थानमा मात्रै रह्यो ।
अब नेपालले स्वर्ण पदकका लागि फाइनलमा भुटानको सामना गर्नेछ । फाइनल खेल मंगलबार दशरथ रंगशालामै हुनेछ । नेपालका लागि अब लगातार दोस्रो वर्ष साग फुटबलको स्वर्ण जित्ने अवसर छ । नेपालले सन् २०१६ मा भारतलाई उसकै भूमिमा हराएर स्वर्ण पदक जितेको थियो ।
प्रकाशित मिति २२ मंसिर २०७६, आईतवार १८:५५
नेइमार र मार्टिनेज एकसाथ भित्र्याउन तीन स्टार खेलाडी बेच्दै बार्सिलोना
प्रिमियर लिगको तयारी : पाँच दिनमा तीन खेल खेलाउने
लिजेन्ड पेले भन्छन्– ‘मेस्सीभन्दा रोनाल्डो उत्कृष्ट खेलाडी’
कोरोनाविरुद्ध लड्न पिएसजीद्वारा एक मिलियन सहयोग
कोरोनाविरुद्ध रोनाल्डोको साथ : फेरि थपे सहयोग
‘कोरोनाको कहर’बीच डर्टमुन्डले प्रशिक्षण थाल्यो
मेस्सीसहित बार्सिलोनाका खेलाडीद्वारा ७० प्रतिशत तलब नलिने घोषणा
‘मेस्सी घाइते बाघको अवस्थामा छन्, कोपा अमेरिकासम्म कुरौं’